Zavatra 10 tokony hatao rehefa tsy mahatsiaro manao zavatra ianao - Blog
Zavatra 10 tokony hatao rehefa tsy mahatsiaro manao zavatra ianao
Ny ankamaroan'ny olona dia hanana fotoana amin'ny fiainany, na dia fohy na maharitra izany, na dia ny fivoahana avy eo am-pandriana aza dia toa tsy misy dikany.
Io fahatsapana tsy te hanao zavatra io mihitsy dia mety vokatry ny fahaketrahana malemy, mety noho ianao reraka ara-pientanam-po na adin-tsaina, na tsotra fotsiny fa manana lisitra tokony hatao raha mbola ny sandrinao izay toa tsy lasa fohy kokoa ary tsy zakanao intsony.
Mety hahatsapa ianao fa tsy manan-tsafidy ary tafahitsoka ao anaty sakantsakana, na mety hoe manana safidy sy karazana hetsika misokatra ho anao ianao ka aleonao tazomy fotsiny ao ambany ondana anao ny lohanao, satria moramora kokoa eo io, misaotra betsaka.
Na inona na inona antony mahatonga ny zava-drehetra tampoka ho ezaka be loatra, dia mety ho sarotra ny misintona ny tenanao hiala amin'izany.
Ny valiny? Tsikelikely. Tsikelikely. Ireo zavatra kely sy zava-bitanao bitika vitanao no hanampy anao handehandeha, na dia miadana aza. Ireto misy fomba tsotra mampino vitsivitsy hanombohana ny fihodinan'ny baolina.
1. Manana shower
Ny fahadiovana matetika dia iray amin'ireo zavatra voalohany tokony haleha rehefa ao anatin'ity karazana toe-tsaina ity ianao. Ny marina anefa dia tsy hahatsapa ho tsara amin'ny tenanao mihitsy ianao raha tsy madio. Ny fahadiovana dia eo akaikin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, sy izany rehetra izany. Makà lisitry ny filalaovana fandroana tsara handehanana, mivoaha, ary mihiràza ankafizinao vitsivitsy eo an-tampon'ny havokavokao.
Na miadana izy ireo, ballad moody na nomerika Latino mitebiteby (mitandrema amin'ny fanandramana manao salsa amin'ny fandroana - faritany mampidi-doza), sarotra ny kivy rehefa mafana ny rano sy tsara ny mozika. Izaho manokana dia manome soso-kevitra kely amin'ny 'Finoana' an'i George Michael, izay nahazo ahy tamin'ny fotoan-tsarotra maro.
2. Manaova akanjo
Averina indray, ny pajama dia mahafinaritra sy mampionona, fa raha mitady hiala amin'ny rutinao ianao dia mila mandeha mafy ao anaty harona fanasan-damba ary mila mitafy akanjo sahaza.
malahelo anao mafy aho, maharary
Ny akanjo ho an'ny toe-tsaina toa izao dia tokony ho marefo nefa mendri-piderana, ary tsara kokoa aza na dia somary adala aza, na miaraka amin'ny fahatsiarovana mahafinaritra mifamatotra amin'izy ireo. Borosio ny volonao. Ry zazavavy, atsipazo makiazy kely raha toa ka zavatrao izany. Raha tsy izany dia hery bebe kokoa ho anao.
3. Mandehana miantsena sakafo
Araka ny nolazain'i Helen Keller indray mandeha, “Ny fahasambarana dia mahalana no miaraka amin'ny vavony foana.” Heveriko fa tsy hisy tsy hanaiky an'izany. Ny vata fampangatsiahana voatahiry tsara no vahaolana amin'ny karazana olana rehetra.
Mitondrà tena amin'ny zavatra roa tsy tokony hohaninao raha tsy maintsy atao, fa lehibe amin'ny voankazo sy legioma koa. Tsy namanao izao ny fianjerana siramamy, ary mila ny vitamina vitanao ianao mba hamerenanao ny tifitrao rehetra.
Fantatro fa ny fisotroan-dronono dia toa manintona kokoa ankehitriny, ary azo antoka fa manana ny toerany izy ireo, fa ny fandaniana azy ireo isan'alina dia tsy mahasalama ny fahasalamanao na ny fifandanjan'ny bankinao. Midina kely amin'ny lavaka Instagram ary mitadiava fomba fahita vitsivitsy mahasalama nefa mahafinaritra ihany koa mba andramana.
Aza mandeha na inona na inona mifangaro, satria hampiala anao fotsiny izany. Ny fanomanana sakafo feno amin'ny tananao manokana dia hanome anao fahatsapana fahombiazana. Na dia tsy mahavita zavatra hafa ianao amin'io andro io, dia namelona ny tenanao ianao, ary olon-kafa hafa tokony hahandroanao / tianao handrahoana sakafo. Dingana iray mankany amin'ny làlan-kaleha izany ao amin'ny bokin'iza.
5. Manaova lisitra
Ny lisitra manetriketrika hatao dia fitaovana matanjaka. Tsy miresaka momba ny fanaovana lisitr'ireo tanjonao lavitra, mega, be loatra aho. Anisan'ny olana angamba izy ireo, ary azo tehirizina amin'ny fotoana hafa. Ny lisitry ny zavatra madinidinika somary somary maoty kokoa azonao tratrarina anio ary avy eo miampita dia fomba fahatsapana tsara toy ny nahazoanao tany ho any.
Ny penina sy taratasy dia tsara lavitra noho io noho ny fitaovana nomerika mahafinaritra, satria tsy misy mahafa-po kokoa noho ny fiampitana ara-batana zavatra iray.
Ataovy anaty lisitra tanteraka izay rehetra azonao eritreretina. Atsipazo ao ny fandroana, fivarotana sakafo, fandrahoana sakafo, fanasana lovia, ary fanasana ny akanjonao, miaraka amin'ilay mailaka tianao hampidirina, io faktiora io izay tianao holazaina…
Ataovy tsotra sy tsotra ny hetsika rehetra azon'izy ireo atao sy ivoahana.
Ahoana no fomba hitondranao tena hanao zavatra tsy tena tianao
Fomba 8 hiasa bebe kokoa amin'ny fiainana (+ ohatra)
Ireo karazan'entana miisa 10 azonao ampiasaina hanatrarana ny tanjonao
6. Declutter Ary Madio
Fahafinaretana iray hafa amin'ny famoahana ny lisitra tokony hatao. Betsaka ny fahamarinana ao amin'io fitenenana hoe 'trano milamina io, misaina tsara.' Ahoana no hanaisanao ny ati-dohanao fotaka raha toa ka mikorontana be ny toerana ara-batana misy anao?
Mametraha mozika tsara na iray amin'ireo podcast malalanao ary avereno amin'ny toerany ny zava-drehetra. Raha tsy manana toerana io dia tadiavo io. Vovoka sy hoover.
Aleo ihany manary zavatra. Mandà ny hiaina ny fiainako manontolo aho amin'ny alàlan'ny fomba fanao somary diso tafahoatra nataon'i Marie Kondo amin'ny famoahana lalàna. Nilaza izy fa raha tsy mitondra fifaliana ho anao izany dia tokony harianao izy, fa ny ba kiraro kosa tsy mitondra fifaliana ho ahy ary ilaiko izy ireo (indrisy, aleoko mipetraka amin'ny nosy efitra tsy mitondra afa-tsy flip-flop, fa tsy azonao ny zava-drehetra).
rehefa misy mijery anao ary mitsiky
Na izany aza, nahazo teboka tena izy momba ny fomba izy manala ny zavatra ara-batana afaka manaisotra ny lanjan'ny fanoharana amin'ny soroka. Andramo ny mamaky ny akanjonao ary manary izay tsy tadiavinao / ilainao / ampidirinao. Ataovy toy izany koa ny kiraronao, ny boky, ny kilalao maloto, ny fanangonana stamp…
Ento any amin'ny fivarotana asa soa izany rehetra izany, ary hanao soa ho an'ny hafa ianao ary koa ho anao.
7. Ahinjiro ny tongotrao
Somary cliché kely aho, fantatro, fa izany dia satria mandeha mivoaka mitsangatsangana dia tena mandeha tokoa. Tsy haiko ny siansa ao ambadiky ny antony mahatonga ny rivotra madio somary mamelombelona toy izao, fa vonona ny hanao filokana aho satria tsy nivoatra nihidy hidina ao anaty biriky biriky na fisaka maloka ny olombelona rehetra tontolo andro.
Na 5 minitra manodidina ny sisin-tany na mihodinkodina mandritra ny ora maro dia hanampy izany.
8. Alao amin'ny paompy ny fonao
Raha miatrika an'io ianao, dia tena mety tsara ny fanatanjahan-tena somary henjana kokoa. Fantatsika rehetra izao fa ny fanazaran-tena dia mamoaka endorphins ao amin'ny atidohanao, izay mahatonga anao hahatsapa ho mahafinaritra. Hevero ho toy ny pilina mahafaly tsy misy voka-dratsiny.
Mameleza gym, mandeha mihazakazaka, mandeha bisikileta, na mankanesa any amin'io kilasim-panatanjahan-tena tadiavinao io. Raha toa ny hevitra hoe manao fanatanjahan-tena, indrindra eo amin'ny fiarahan'olon-kafa, dia toa tsy mahaliana daholo izany, aza mifantoka amin'izany.
Mifantoha amin'ny fahazoana ny 'fitafiana mavitrika' anao sy ny fametahana ny mpampiofana anao. Tsy te ho iray amin'ireo olona mandeha miakanjo toa ny fanaovana gym izy ireo ary tsy mandeha mihitsy, ka raha vantany vao azonao ny fitaovana dia mety ho menatra ianao amin'izany.
hahita lehilahy ve aho
9. Mandehana Jereo ny natiora
Mponina amin'ny tanàna ve ianao? Ny fatra voajanahary dia mety ho izay nandidian'ny dokotera. Hanao izao ny valan-javaboarinao eo an-toerana, fa manandrama miditra any ambanivohitra ASAP.
Tsy misy na inona na inona toy ny toerana ara-tsaina azonao atao rehefa avy lavitra ianao na aiza na aiza misy ny natiora ho an'ny orinasa fotsiny. Mazava ho azy fa afaka mitondra namana koa ianao!
Ny maha any an-tendrombohitra na mijery ny halavan'ny ranomasina dia fomba iray ahafahana miverina mijery kely.
10. Manomeza namana
Betsaka ireo voalaza etsy ambony ireo hetsika mitokana , na dia afaka mifehy namana foana aza ianao hiaraka aminao (afa-tsy amin'ny fandroana sy miakanjo, raha tsy hoe izy ireo namana tena tsara ).
Mety hahatsapa ianao mandany fotoana irery amin'izao fotoana izao ary tsara izany, fa aza mitokantokana tanteraka. Mandany ny fotoana ifaneraseranao amin'ireo olona izay tena manadanja, izay tena karakarainao ary afaka ny ho eo akaikinao.
Miresaha amin'ny zava-manahirana anao, fa aza mipetraka na mimenomenona, ary avy eo mandroso ary avelao izy ireo hanala ny sainao amin'ny zavatra.
Ny fanaovana ireo rehetra na sasany amin'ireto zavatra ireto dia fomba tsara iray hahazoana vanim-potoana kely. Raha vantany vao madio ianao, miakanjo tsara, manao fanatanjahan-tena ary amin'ny toerana milamina, mazava ny fomba ahafahanao manomboka mandroso.
Mazava ho azy, raha tsy afaka manetsika ny fahatsapana fotsiny ianao dia tokony hieritreritra ny mitsidika mpitsabo iray momba ny fahasalamana, satria tsy tokony hohamaivaninao mihitsy ny fahasalamanao.
ahoana no ahafantaranao raha misy poizina ny ray aman-dreninao
ny fomba hanehoana ny fihetseham-ponao an-tsoratra
wwe dean ambrose sy renee tanora
stares ahy izy amin'ny fotoana rehetra ny